Inde: hilefitra ve i Kashmir? Sa mety hisy ny fampihavanana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2010 21:15 GMT
Fifandonana tany Kashmir. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Kashmiridibber. CC BY-NC-ND
Taorian'ny fifanandrinana nahitana faty olona vao haingana tany amin'ny faritra eo ambany fifehezana Indiana Jammu sy Kashmir, dia nifoha tamin'ny torimasony ny governemanta Indiana afovoany ary nandefa delegasiona ny PM mba hiresaka. Notarihan'ny Minisitra teo an-toerana ny delegasiona matanjaka miisa 40, ary hita tao anatin'izany ny mpanao lalàna avy amin'ireo antoko politika maro an'isa any Inde. Androany no natombok'izy ireo tany Kashmir izany asany izany izay haharitra roa andro ary nahitana ny fanalavana ny tsy fahazoan-dalana mivezivezy amin'ny alina ary nahitana fahombiazana ihany koa tamin'ny farany ka nanomboka niresaka tamin'ireo mpitarika ny mpanohitra izy ireo, ireto farany izay nandà hatrany ny hihaona tamin'ireto delegasiona ireto teo aloha.
Tonga fofona noho ny olan'i Kashmir ihany tamin'ny farany ny tontolon'ny bilaogy Indiana ary nidirany lalindalina kokoa ny mikasika ny vinavina sy ny maha-fotoana fanararaotana ho amin'ny fampihavanana sy ny fandriampahalemana . Manaiky ny fifaninan'ny Governemanta ny Indian Political Blog :
Toa sahala amin'ny tena tsy afaka mahavita (ihany koa) na inona na inona manan-danja ny Governemanta Afovoany , raha toa ka mbola tsy fantany hoe iza no tena azony ifanarahana, ary tsy azony atao ny manipy fotsiny an'i Omar Abdullah (Minisitra lehibe) raha toa ka mbola tsy betsaka ny safidy .
Mandalina ireo dian'ny Governemanta Indiana Afovoany i Words from Solitude :
Faly ny hanao filazana fotsiny ny Praiministra fa vonona ny ” handinika” ny fangatahana amin'ny fahazakan-tena ao amin'ny fanjakana ny Afovoan-tany ” sahala amin'ny hoe niaraka nanapaka izany hevitra izany daholo ireo antoko politika ireo” nefa tena fantatr'izy ireo tsara fa tsy hisy na inona na inona hiseho eo raha mbola tena manohitra izany foana ny antoko mpanohitra matanjaka BJP .
Nanazava ny fihetsika sasantsasany ny BBC mikasika ireo Kashmiri izay mizara ny tahony, ny manahirana azy ary ny alahelony amin'ny governemanta, ary koa ny ‘tsy fanarahan-dalàna sy ny lalàna Indiana tena tsy rariny’ any Kashmir. Tena mibaribary be ihany koa ny haromotan'izy ireo amin'ny tafika Indiana.
Na izany aza, manontany an'i Omar Abdullah mikasika ny zava-miseho amin'izao fotoana izao amin'ny hanasaziana ny tafika Indiana sy ny Hery mitana fitaovam-piadiana izay efa manana fahefana manokana hanao hetsika (Armed Forces Special Powers Act – AFSPA) ny mpanao gazety efa zokinjokiny M J Akbar :
Inona no heloka nataony? Tsy faty olona iray ihany anefa no nateraky ny balan'ny tafika tamin'ity krizy ity . Avy amin'ny basin'ny J&K polisy sy CRPF ireo bala ireo. Maninona ny olona rehetra no manarona izao zava-misy izao amin'ny fahanginana nefa managam-bovona amin'ny tafika ?
Fa maninona ny tafika Indina no tanjona iray ho an'ireo izay te-hampizara an'i Inde? Tsy sarotra ny valin'ny fanontaniana. Tsy mahavita miaro ny tanin'i Inde iray manontolo ny polisy, na ny an'ny fanjakana izany na ny an'ny afovoan-tany. Ny tafika Indiana nefa mahavita izany. Ho an'ny tombontsoa an'ireo mpampisara-bazana sy ireo lohandohany any Islamabad anefa izany mba hananganana disadisa eo amin'ny tafika Indiana sy ny fanjakana Indiana .
Mandritra izany, mitantara ny fihetseham-pon'ireo Kashmiri ny KashmirGlobal:
Mitoraha vato dia ho voan'ny bala . Tsy toy izany mihitsy no niheverana azy ity. Nefa, izany no miseho any Kashmir. Maherin'ny 100 ny aina nafoy taty aoriana kely, nefa mbola tsy misy fijanonana ihany ny herisetra amin'ny fampitonena ny hafanampon'ny Kashmiri. Firy ny isan'ireo ray izay mandevina ny zanany? Firy ireo reny izay mipetraka anoloana vato mandritra ny androm-piainany sisa tavela?
Mijery indray ny zava-misy any Kashmir i Somik Raha ao amin'ny Desicritics :
Ao amin'ny fiverimberenan'ny fiainan'ny tanora Kashmiri sy ny mpitarika azy, toa tahaka ny misy toerana natao ho an'ny ranomaso lehibe izany, ho an'ny rivo-baovao amin'ny tsy fanekena ny tery vay manta. Mbola tsy fantatra na hitondra amin'ny fahalalahana tanteraka ity tsy fanekena ny tery vay manta ity na tsia, fa ny azo antoka aloha dia hanala izay kely mba mety hahazoana fahalalahana noho ny tsindrihazolena. Ahoana ny fomba hanamarinana ny tsindry hazo lena any Inde ?Tena resaka mikasika ny fandriam-pahalemana ve izany ?
Manamafy ny filana ny fampihavanana, ny fandriam-pahalemana ary ny firaisan-kina i Aparna Pande ao amin'ny Pajama's Media :
Amin'ny maha Indiana antsika, mirehareha isika ny amin'ny fiainana laika misy antsika sy ny demokrasia iainantsika. Miainga avy amin'ny Praiminisintsika Nehru mihitsy, nisisika foana ny mpitarika antsika fa ao amin'ny faritr'i Inde i Kashmir — ary te ho ao anatin'i Inde ireo Kashmiri noho ireo fahasoavana ireo indrindra . Amin'ny fankalazana ny faha 64 taonan'ny fahaleovantenantsika, ndeha isika hiezaka ny hanana ireo idealy ireo ao amin'ny politikantsika mikasika an'i Kashmir dieny mbola tsy tara loatra.
“Mila manomboka ny fampielezan-kevitra haingana amin'ny fifampiraharahana ny governemanta Indiana hanitsiana ny tantara niova mikasika an'i Kashmir, ” hoy i Pragmatic Euphony mampatsiahy .
Manana fanantenana mikasika ny ezaka ataon'ny antoko delegasiona rehetra i Words From Solitude ary manana ity hafatra ity ny mpitoraka bilaogy ho an'ireo Kashmiri :
Te hino isika fa hanampy hanokatra ny ankamaroan'ny varavarana saika nikatona rehetra ny fandraisan'anjara ary hiteraka rivotra azo iainana ho an'ny fifanakalozan-kevitra ara-politika mavesa-danja miaraka amin'ireo fitsinjarana rehetra ao amin'ny fanjakana izany. Tena avy amin'ny fonay, te-haneho ny fiarahanay miory amin'ireo fianakaviana izay namoy ireo akaiky azy sy ireo malalany nandritra iny savorovoro farany iny izahay ary koa maneho ny firaisan-kina amin'ireo Kashmiri rahalahinay sy anabavinay. Miantso azy ireo izahay hanohy ny fanoherany am-piadanana . [..]
Te hilaza aminareo izahay fa izahay dia tena miraharaha izany tokoa. Te hanao antso avy amn'ny fo ihany koa izahay ho an'ny sokajy ara-politikan'i Inde mba hijery ireo tsy mety rehetra niseho tamin'ny lasa ary hanao fanitsiana amin'izany .